Cinema HD V2 एप - नि:शुल्क चलचित्र, शृङ्खला र टिभी कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस्
Android को लागि
Cinema HD FireStick को लागी
Cinema HD एन्ड्रोइड टिभी बक्सको लागि
Cinema HD Google TV 4k को लागि
Cinema HD स्मार्ट टिभी को लागी
Cinema HD Roku को लागि
PC को लागी
Cinema HD विन्डोजको लागी
Cinema HD म्याकको लागि
Cinema HD लिनक्स को लागी
फिक्स गर्नुहोस् Cinema HD त्रुटिहरू
Cinema HD - वास्तविक डेब्रिड काम गर्दैन [फिक्स्ड]
यो Cinema HD APK मा कुनै डाटा उपलब्ध छैन, कुनै लिङ्क छैन, कुनै जडान छैन, वा सर्भर त्रुटि (FIX)
सबटाइटल क्र्यासिङ, बफरिङ/इन्स्टल नगर्ने, र सिनेमा एपीके क्र्यासिङ सबै समाधान गरिएका छन्।
Cinema HD APK कुनै डाटा छैन, कुनै पनि प्रदान गरिएको छैन, कुनै जडान वा सर्भर त्रुटि छैन (फिक्स)
चलचित्रको समीक्षा गर्नुहोस् Cinema HD
आजकल, मानिसहरू नियमित रूपमा टेलिभिजनमा स्ट्रिमिङ कार्यक्रमहरू हेर्छन् वा सशुल्क एपहरूमा आफ्ना मनपर्ने चलचित्रहरू र कार्यक्रमहरू हेर्न इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। तपाईंले आफ्नो मनपर्ने कार्यक्रमहरू र चलचित्रहरू प्रदान गर्ने धेरै एपहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ Netflix, Hulu, एचबीओ, अन्य स्ट्रिमिङ एपहरू, र ती सबै सशुल्क एपहरू हुन्।
यदि तपाइँ उच्च गुणस्तरको सामग्री र चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरूको ठूलो पुस्तकालयको साथ पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्ट्रिमिङ एप अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, डाउनलोड गर्नुहोस् Cinema HD APK हाम्रो वेबसाइट बाट CinemaHDv2.Net अहिले मजा लिन।
तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइड यन्त्रमा आफूलाई मन पर्ने र रमाइलो गर्ने सामग्री चाँडै फेला पार्नुहुनेछ यस एपले प्रदान गर्ने आकर्षक सुविधाहरूको लागि धन्यवाद। यी सुविधाहरू अन्वेषण गर्न लेख पढ्न जारी राख्नुहोस्।
परिचय दिँदै Cinema HD Apk
यसका उत्कृष्ट सुविधाहरू Cinema HD
सरल प्रयोगकर्ता इन्फेसेसन
धेरै चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरू
लघु सिनेमा अनुभव
उपशीर्षकहरूको साथ सामग्रीको आनन्द लिनुहोस्
आफ्नो सूचीमा आफ्नो मनपर्ने शो थप्नुहोस्
सुझाव गरिएको सूची सुविधा
उच्च गुणस्तर क्रान्ति र ध्वनि
अफलाइन चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरूको आनन्द लिनुहोस्
बचत र पुनर्स्थापना
खासमा के छ Cinema HD एपीके फाईल
असीमित संख्यामा चलचित्र र कार्यक्रमहरू नि:शुल्क
कुनै दर्ता आवश्यक छैन
कसरी डाउनलोड गर्ने Cinema HD एन्ड्रोइडमा एपीके?
डाउनलोड गर्न सामान्य चरणहरू Cinema HD अनुप्रयोग
स्थापना गर्न विस्तृत निर्देशनहरू Cinema HD Apk
कसरी डाउनलोड गर्ने Cinema HD फायरस्टिक 4K, फायर टिभीमा एप?
स्थापना गर्न को लागी चरणहरु Cinema HD पीसी को लागी एपीके?
डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस् Cinema HD Windows 11/10/8.1/7 PC वा MAC कम्प्युटरमा APK [ट्यूटोरियल]
लिनक्स मिन्ट, उबुन्टु र फेडोरामा, स्थापना गर्नुहोस् Cinema HD MOD APK।
लिनक्समा Shlashlik एन्ड्रोइड इमुलेटर स्थापना गर्न चरणहरू
लिनक्समा GenyMotion एन्ड्रोइड इमुलेटर कसरी प्राप्त गर्ने
स्थापना Cinema HD Shashlik/GenyMotion एन्ड्रोइड इमुलेटर प्रयोग गरेर लिनक्स कम्प्युटरमा एप
Genymotion एन्ड्रोइड इमुलेटर प्रयोग गर्दै
कसरि प्राप्त गर्ने Cinema HD Android TV Box र Smart Tv मा काम गर्नुहुन्छ?
विशेषताहरु Cinema HD स्मार्ट टिभीमा
स्थापना Cinema HD V2 स्मार्ट टिभीमा [LG, VU, OnePlus, Samsung, MI, Phillips]
Trakt TV मा कसरी प्रयोग गर्ने Cinema HD v2 स्मार्ट टिभीमा
डाउनलोड Cinema HD V2 एन्ड्रोइड टिभी बक्सको लागि APK
स्थापना Cinema HD V2 Roku Stick मा APK
चरण 1: आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरणमा, Local Cast एप डाउनलोड गरी स्थापना गर्नुहोस्।
चरण २: आफ्नो Roku यन्त्रमा Local Cast Receiver एप डाउनलोड गरी स्थापना गर्नुहोस्।
चरण 3: आफ्नो एन्ड्रोइड वा एप्पल उपकरण र Roku स्टिक जडान गर्नुहोस्
स्थापना Cinema HD v2 Chromecast मा Google TV 4K को लागि
कसरी अपडेट गर्ने Cinema HD नवीनतम संस्करण संग apk?
कसरी प्रयोग गर्ने Cinema HD एपीके?
Cinema HD तपाईंको एन्ड्रोइड यन्त्रहरूका लागि एउटा उत्कृष्ट एप हो जसले तपाईंलाई लोकप्रिय चलचित्रहरू र उच्च गुणस्तरका टिभी कार्यक्रमहरूको सूची दिन्छ। यस एपले तपाइँलाई तपाइँलाई मनपर्ने र रमाइलो गर्न छनौट गर्ने चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरू छिटो फेला पार्नको लागि तपाइँलाई खोज इन्जिन दिन्छ।
Cinema HD बीटा संस्करण
यस एपले वेबसाइटमा नि:शुल्क उपलब्ध लिंकहरू प्रदर्शन गर्नेछ, र तिनीहरू तपाईंको उपकरणमा देखिनेछन्। यस एपका आकर्षक सुविधाहरूको साथमा, तपाइँ तपाइँको मनपर्ने शो र चलचित्रहरूको लागि स्ट्रिमिङ विकल्पहरू कहिल्यै समाप्त हुने छैन। के गर्छ? Cinema HD Apk छ?
एन्ड्रोइड टिभि बक्स
यो Cinema HD एपसँग सरल इन्टरफेस छ जसले तपाईंलाई यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र एप स्क्रिनमा रहेको प्रकार्य बटनहरू छिटो बुझ्न मद्दत गर्छ। तपाईं सजिलैसँग शीर्षकहरू मार्फत ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ Cinema HD यो एपमा व्यवस्था गर्दछ।
यसले तपाइँलाई कुन सामग्रीको मजा लिने वा नगर्ने भनेर निर्णय गर्नु अघि चलचित्र र कार्यक्रमहरूको ट्रेलरहरू हेर्न पनि अनुमति दिन्छ। यस सिनेमा एपको राम्रो र सरल इन्टरफेसले तपाईंलाई उत्कृष्ट चलचित्र हेर्ने अनुभव प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
यो सिनेमा अनुप्रयोगले तपाईंलाई 60 कोटीहरूमा चलचित्र र कार्यक्रमहरूको खजाना प्रदान गर्दछ। तपाईं सजिलैसँग यस एपको कोटीमा डराउने, रोमान्स, एनिमे, र थपका विभिन्न प्रकारका चलचित्रहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। चलचित्रहरूको विशाल पुस्तकालयको अलावा, तपाईंले सजिलैसँग टिभी कार्यक्रमहरू फेला पार्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा नि:शुल्क आनन्द लिनुहुनेछ Cinema HD.
Cinema HD तपाईंलाई सानो सिनेमामा हेर्ने जस्तै उत्कृष्ट चलचित्र हेर्ने अनुभव दिन्छ। यदि तपाइँ चलचित्र हेर्न सिनेमाघर जान डराउनुहुन्छ भने, यो एप तपाइँको लागि उपयुक्त विकल्प हुनेछ।
Cinema HD v2 - लघु सिनेमा अनुभव
तपाईले आफ्नो एन्ड्रोइड फोन खोल्नु पर्छ र तपाईको मनपर्ने सामग्रीको आनन्द लिनको लागि तपाईको घरमा वा तपाई जहाँ चाहानुहुन्छ यो Cinema apk पहुँच गर्न आवश्यक छ। यो एपले तपाइँ जस्ता चलचित्र र मनोरन्जन उत्साहीहरूलाई धेरै समय बचत गर्न र तपाइँको मनपर्ने सामग्रीको मजा लिन मद्दत गर्नेछ।
यो Cinema HD अनुप्रयोग तपाइँलाई एक उपयोगी सुविधा दिनेछ जुन तपाइँ पूर्वनिर्धारित रूपमा सबटाइटलहरूसँग भिडियोहरू प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले उपशीर्षकहरू चयन गर्नुहुन्न भने, तपाईंले सामग्रीहरूको आनन्द लिनको लागि म्यानुअल रूपमा फाइल चयन गर्नुपर्नेछ। तपाईंलाई सबैभन्दा उत्तम चलचित्र हेर्ने अनुभव दिनको लागि अनुप्रयोगले सही रूपमा उपशीर्षकहरू प्रदान गर्नेछ।
उपशीर्षकहरूको साथ सामग्रीको आनन्द लिनुहोस् - Cinema HD v2
In Cinema HD, तपाईं संग एक महान चयन हुनेछ ट्र्याक टिभी एकीकरण जसले तपाईंलाई आफ्नो मनपर्ने शोहरू छिटो प्ले गर्नको लागि प्लेलिस्टहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यो सुविधाले तपाईंले भर्खरै हेर्नुभएको शोहरूको सूची सिर्जना गर्नेछ र तपाईंले हेर्नुभएको शो वा चलचित्रको प्रत्येक पटक नयाँ एपिसोड हुँदा तपाईंलाई सूचित गर्नेछ।
नतिजाको रूपमा, तपाईंले छिटो र सजिलैसँग नयाँ सामग्री अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ र एपले प्रस्ताव गर्ने धेरै आकर्षक सुविधाहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
संग Cinema HD, तपाईंसँग आफ्नो मनपर्ने चलचित्रहरू र कार्यक्रमहरूको द्रुत रूपमा आनन्द लिनको लागि अटोप्ले सक्रिय गर्ने विकल्प हुनेछ। जब तपाइँ केहि चयन गर्नुहुन्छ, यसले केहि लिङ्कहरू प्रदर्शन गर्नेछ, र तपाइँ ती लिङ्कहरू मध्ये एक चयन गर्न र हेर्न सुरु गर्न "प्ले" विकल्प चयन गर्न आवश्यक छ। तर अटोप्लेको साथ, तपाईंले लिङ्कहरू छनौट गर्नुपर्दैन, र Cinema HD अनुप्रयोग तपाईंको लागि भिडियो प्ले गर्न सुरु गर्नेछ।
Cinema HD यससँग अर्को उपयोगी सुविधा छ जुन सुझाव गरिएको सूची हो, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले मन पराउने यो चलचित्र अनुप्रयोगको बलियो बिन्दु। धेरै नयाँ शो र चलचित्रहरू खोजी गरिन्छ र दैनिक अनुप्रयोगको मुख्य मेनुमा अद्यावधिक गरिन्छ।
Cinema HD V2 - सुझाव गरिएको सूची सुविधा
थप रूपमा, अनुप्रयोगले तपाइँलाई अर्को सूची पनि प्रदान गर्दछ जुन तपाइँले हेर्दै वा खोजिरहनु भएको समान विधाका चलचित्रहरू र कार्यक्रमहरू फिल्टर गर्न र सिफारिस गर्नको लागि एपको एआई फिल्टरिङ उपकरणमा मात्र निर्भर गर्दछ।
चलचित्र र शोले त्यो हो Cinema HD नाम, मूल्याङ्कन, उत्पत्ति, रिलिज मिति, ट्रेलर, र मुख्य अभिनेताहरू जस्ता विस्तृत जानकारीको साथ तपाईलाई सिफारिस गरिन्छ। तपाईंलाई चलचित्रहरू बारे जानकारी बुझ्न मद्दत गर्ने विस्तृत जानकारीबाट, कार्यक्रमले तपाईंलाई तपाईंको लागि सही सामग्री छनोट गर्न र मजा लिन सजिलो बनाउँछ।
तपाईलाई उत्कृष्ट अनुभव दिनको लागि, ठूलो संख्यामा शो र चलचित्र स्ट्रिमहरू प्रदान गर्नुको साथै, Cinema HD तपाईंलाई वास्तविक-डेब्रिडमा लगइन नगरी उच्च-गुणस्तरको सामग्रीको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ।
तपाईं आफ्नो मनपर्ने शो र चलचित्रहरु संग उत्तम आराम समय हुनेछ पूर्ण उच्च गुणस्तर यो अनुप्रयोग संग संकल्प। साथै, तपाईं हेर्नको लागि अटोप्ले सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ HD or अल्ट्रा HD मा चलचित्रहरू Cinema HD.
अफलाइन डाउनलोड सुविधाको साथ तपाईंसँग अझ रमाइलो चलचित्र हेर्ने अनुभव हुनेछ Cinema HD तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ। यस उपयोगी सुविधाको साथ, तपाईं सजिलैसँग चलचित्रहरू, टिभी कार्यक्रमहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग आफ्नो मनपर्ने सामग्रीको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
चलचित्र र टिभी शो - Cinema HD v2
तपाईं यससँग जुनसुकै बेला र जहाँ पनि आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा चलचित्रहरू, र कार्यक्रमहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ Cinema HD Apk एप। चलचित्रहरू, टिभी कार्यक्रमहरू डाउनलोड गर्नुहोस् र टिभी एपिसोडहरूमा डुब्नुहोस्, इन्टरनेट जडान बिना चलचित्र वा तपाईंको उपकरणमा मोबाइल डेटा शुल्कहरू।
Cinema HD तपाईंका सबै मनपर्नेहरू, इतिहास, सेटिङहरू, र प्राथमिकताहरू तपाईंको लागि छुट्टै फाइलमा ब्याकअप गरेर एप प्रयोग गर्दा तपाईंको धेरै समय बचत गर्नेछ। यस फाइलको स्थान पत्ता लगाउन, तपाईं जानुहुन्छ डाउनलोड/cinema HD/ ब्याकअप.
तपाइँ फाइल निर्यात गर्न र तपाइँको कुनै पनि नयाँ उपकरणहरूमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, यो एपले तपाईंलाई स्वत: ब्याकअप सुविधा प्रदान गर्दछ, त्यसैले तपाईंले ब्याकअप र रिस्टोर सेटिङहरूमा एपबाट बाहिर निस्केपछि यसलाई सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट, तपाईंले एप बन्द गरेपछि ब्याकअप ह्यान्डल हुनेछ, र तपाईं सजिलैसँग अर्को पटक आफ्नो मनपर्ने सामग्रीको आनन्द लिन जारी राख्न सक्नुहुन्छ।
डाउनलोड Cinema Hd v2 APK
यो Cinema HD अनुप्रयोग फिल्टरहरू, पूर्वनिर्धारित भिडियो प्लेयर, र कम गुणस्तर सामग्री फिल्टर गर्ने क्षमता जस्ता अन्य धेरै आधारभूत सुविधाहरू पनि प्रदान गर्नेछ। तपाइँ तपाइँको मनपर्ने चलचित्र र शो को एक अद्भुत अवलोकन अनुभव दिन को लागी यी विविध, उपयोगी सुविधाहरू पाउनुहुनेछ।
यदि तपाईं अझ उत्कृष्ट अनुभवको लागि नि: शुल्क धेरै उन्नत सुविधाहरू सहितको परिष्कृत संस्करण अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, डाउनलोड गर्नुहोस् Cinema HD Apk हाम्रो वेबसाइट मा CinemaHDv2.Net। हाम्रो संग Cinema HD मोड एपीके, तपाईंले धेरै उन्नत सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, जसमा: सबै सामग्री निःशुल्क र असीमित छन्।
Cinema HD Apk को परिमार्जित संस्करण हो Cinema HD हाम्रो वेबसाइटमा नि:शुल्क उपलब्ध टिभी कार्यक्रमहरू CinemaHDv2.Net। यो apk फाइल संग, तपाईं स्वतन्त्र रूपमा सबै सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ कि Cinema HD अनुप्रयोग नि: शुल्क प्रदान गर्दछ।
Cinema hd - HD चलचित्रहरू निःशुल्क हेर्नुहोस्
साथै, Cinema HD Apk तपाईलाई सामग्रीको असीमित मात्रा पनि प्रदान गर्दछ, ताकि तपाईले सामग्री समाप्त हुने चिन्ता नगरी आफ्नो मनपर्ने चलचित्र र कार्यक्रमहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
यस चलचित्र एपका यी उन्नत सुविधाहरूको लागि धन्यवाद, तपाईंले धेरै पैसा बचत गर्नुहुनेछ र मासिक सदस्यता शुल्क तिर्न आवश्यक पर्दैन, केवल आफ्नो मनपर्ने सामग्री चयन गर्नुहोस् र आनन्द लिनुहोस्।
यदि तपाईंले कहिल्यै चलचित्र हेर्ने प्लेटफर्महरू जस्तै अनुभव गर्नुभएको छ Netflix, एचबीओ, वा केहि अन्य स्ट्रिमिङ एपहरू, तपाइँ सायद तपाइँको मनपर्ने चलचित्रहरू, शोहरू र पुरस्कारहरू पहुँच गर्न खाताको लागि साइन अप गर्न र शुल्क तिर्न थकित हुनुहुनेछ। तिनीहरूलाई जगाओ।
अब, तपाईले यस बारे चिन्ता लिनु पर्दैन, Cinema HD अनुप्रयोगले खाताको लागि साइन अप नगरीकन र पूर्ण रूपमा निःशुल्क रूपमा चलचित्रहरू, र टिभी कार्यक्रमहरू छनौट गर्न र स्ट्रिम गर्नको लागि उपकरण प्रदान गर्दछ।
तपाईंले आफ्नो नाम, ठेगाना, र इमेल जस्ता खाता दर्ता गर्न आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी खुलासा गर्ने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन। यस सुविधाको साथ, तपाइँ तपाइँको खातामा लग इन नगरीकन सिनेमाले प्रस्ताव गर्ने तपाइँको मनपर्ने सामग्रीमा स्वतन्त्र रूपमा पहुँच गर्न र मनोरन्जन गर्न सक्नुहुन्छ।
In Cinema HD Apk, तपाईंले आफ्नो अनुभवलाई बाधा पुर्‍याउन विज्ञापनहरू देखा पर्ने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन। को यो मोड संस्करण Cinema HD सबै विज्ञापनहरू हटाउनेछ ताकि तपाईं चलचित्रहरू, र टिभी कार्यक्रमहरू निर्बाध रूपमा र कुनै अवरोध बिना स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ।
Cinema hd v2 apk डाउनलोड गर्नुहोस्
डाउनलोड गर्न Cinema HD Apk नि: शुल्क चलचित्रहरू, टिभि कार्यक्रमहरूको मजा लिनको लागि आवेदन, तपाइँ तलका सरल चरणहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ:
चरण 1: लाई Cinema Apk स्थापना गर्नुहोस्, तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरणलाई बाह्य स्रोतहरूबाट यो एप स्थापना गर्न अनुमति दिन आवश्यक छ। यो सेटिङ सक्षम गर्न, तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइडमा सेटिङहरूमा जानु पर्छ, त्यसपछि सुरक्षा चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि अज्ञात स्रोतहरू सक्षम गर्नुहोस्।
चरण 2: तपाईँको एन्ड्रोइड उपकरण स्क्रिनमा, तपाईँ जानुहुनेछ CinemaHDv2.Net र खोज्नुहोस् Cinema HD Apk खोजी पट्टीमा।
चरण 3: तपाईले "डाउनलोड Cinema HD v2 APK" लेखको तल्लो भागमा बटन
चरण 4: पर्खनुहोस् Cinema HD Apk केही सेकेन्डका लागि एप डाउनलोड प्रक्रिया, त्यसपछि तपाइँ यो सिनेमा एप रमाइलो गर्न खोल्न सक्नुहुन्छ।
⬇︎ डाउनलोड गर्नुहोस् Cinema HD V2 APK
सबैभन्दा पहिले, तपाइँ आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरणको सेटिङहरूमा जानुहोस्, र "अनुप्रयोग र सूचनाहरू":
अर्को, चयन गर्नुहोस् "अनुप्रयोग अनुमतिहरू"
त्यसपछि, तपाईं जानुहुन्छ "अज्ञात अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्नुहोस्"
छनौट Chrome ब्राउजर विकल्पहरूको लागि:
खोल्नुहोस्: "यस स्रोतबाट अनुमति दिनुहोस्"
गृह स्क्रिनमा, तपाइँ क्रोम ब्राउजरमा जानुहुन्छ र त्यसपछि छनौट गर्नुहुनेछ डाउनलोड
को प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस् Cinema Apk स्थापना गर्नुहोस् फाइल
स्थापना Cinema HD v2
स्थापना पूरा गर्न पर्खनुहोस्
खुला Cinema Hd v2
को स्थापना प्रक्रिया पूरा गरेपछि Cinema HD V2, अब तपाइँ तुरुन्तै apk फाइल खोल्न सक्नुहुन्छ र Cinema Apk ले तपाइँको एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूमा एन्ड्रोइड इमुलेटर बिना प्रदान गर्ने धेरै चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
यसलाई डाउनलोड गर्न Cinema HD Apk on फायरस्टिक 4K, फायर टिभी स्टिक 4K, यदि तपाईंले आफ्नो मा कुनै पनि Apk फाइल स्थापना गर्नुभएको छ आगो स्टिक, यो एप स्थापना गर्न सजिलो हुनेछ। अन्यथा, तपाईंले स्थापना गर्न तलका चरणहरू पालना गर्न आवश्यक हुनेछ Firestick मा Cinema Apk:
चरण 1: पहिले, तपाईंले आफ्नो यन्त्र सुरु गर्नुहुनेछ र यन्त्रको गृह स्क्रिन देखिनका लागि पर्खनुहुनेछ। तपाइँको नियन्त्रण प्रणाली स्क्रिनमा, तपाइँ सक्षम गर्न आवश्यक छ "अज्ञात स्रोतहरू"(अज्ञात अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्नुहोस्) बदल्न।
चरण 2: अर्को, छान्नुहोस्: "मेरो फायर टिभी"वा"मेरो उपकरणहरू"
चरण 3: त्यसपछि, तपाइँ क्लिक गर्नुहुनेछ: "विकासकर्ता विकल्प"
चरण 4: स्क्रिनले विकल्प देखाउनेछ "अज्ञात स्रोतहरू" जुन तपाइँ सक्षम वा असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण 5: अर्को, तपाईले विकल्प खोज्नुहुनेछ "डाउनलोडरगृह स्क्रिनमा र क्लिक गर्नुहोस् "अनुमति" डाउनलोडर एप खोल्न यो एप प्रयोग गर्न।
डाउनलोडर स्थापना गर्नुहोस्
चरण 6: मा "डाउनलोडकर्ता अनुप्रयोग"तपाईंको स्क्रिनमा फायर टिभी स्टिक, तपाईले यसको ब्राउजर खण्डमा गर्नुहुनेछ र लिङ्क प्रविष्ट गर्नुहोस्: https://cinemahdv2.net/download/ खोल्न सिनेमा एपीके एप र चलचित्र र कार्यक्रमको मजा लिन यो नि: शुल्क स्पेस फाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। वा apk फाइल यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्:
⬇︎ डाउनलोड गर्नुहोस् Cinema HD V2.4.0 APK
चरण 7: डाउनलोड पूरा गरेपछि Firestick मा Cinema Apk, आगो टिभी, यसले त्यसपछि स्वचालित रूपमा र छिटो स्थापना सेट अप गर्नेछ। तपाईंले गर्नु हुँदैन: स्थापना प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनको लागि मुख्य स्क्रिनबाट बाहिर ननिस्कनुहोस्।
चरण 8: पूरा गरेपछि स्थापना गर्दै Firestick मा Cinema Apk, तपाईं खोल्न सक्नुहुन्छ Cinema HD Apk फाइल र आफ्नो मनपर्ने शो र चलचित्र कुनै पनि समय, जहाँ तपाईं चाहनुहुन्छ आनन्द लिनुहोस्।
तपाईं छिटो गर्न सक्नुहुन्छ स्थापित गर्नुहोस् Cinema HD APK on फायरस्टिक 4K, फायर टिभी स्टिक, फायर टिभी घन तपाइँको मिडिया पहुँच को लागी सुरक्षित र कुशल कदमहरु संग। प्रयोग गर्दा तपाईं स्वतन्त्र रूपमा स्ट्रिमिङ सामग्रीको मजा लिन सक्नुहुन्छ Cinema HD एपीके स्ट्रिमिङ साइटहरूमा नजाइकन वा एपहरू इन्स्टल गर्नुपर्छ।
तपाईलाई आवश्यक पर्नेछ एन्ड्रोइड इमुलेटर यसका लागि। Nox एप प्लेयर धेरै उपयोगी सुविधाहरू भएको उत्कृष्ट नयाँ एन्ड्रोइड इमुलेटर हो। तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ Nox एप प्लेयर तलबाट अफलाइन सेटअप।
⬇︎ विन्डोजको लागि NoxApp प्लेयर डाउनलोड गर्नुहोस्
⬇︎ म्याकको लागि NoxApp प्लेयर डाउनलोड गर्नुहोस्
प्रतीक्षा स्थापना समाप्त गर्न को लागी। अफलाइन सेटअप डाउनलोड समाप्त भएपछि, स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्न कार्यान्वयनयोग्य फाइलमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्। Nox एप प्लेयर.
जब तपाईं हुनेछ Nox एप प्लेयर सुरु गर्नुहोस्, एक स्थापना विजार्ड केहि बटनहरु संग स्क्रिन मा देखिन्छ। अन्तिम विन्डोमा, एक 'स्थापना' बटन देखिनेछ। कृपया ट्याप गर्नुहोस्'स्थापना' सेटअप गर्न बटन आफ्नो Windows PC/MAC कम्प्युटरमा Nox एप प्लेयर स्थापना गर्नुहोस्.
इमुलेटर सुरु गरेपछि, यसलाई स्थापना गर्न केही समय लाग्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। Nox एप प्लेयर चाँडै तपाइँको PC मा सेट अप हुनेछ।
त्यसोभए, यदि तपाइँ पहिले नै छैन भने, सिनेमा APK डाउनलोड गर्नुहोस् तलको लिङ्कबाट।
⬇︎ डाउनलोड गर्नुहोस् Cinema HD APK
जब एपीके फाइलहरू डाउनलोड गरिसकेपछि, Nox एप प्लेयर सुरु गर्नको लागि तिनीहरूलाई डबल-क्लिक गर्नुहोस्। देखिने पप-अप मेनुबाट खोल्नुहोस् चयन गर्नुहोस्।
इमुलेटरले स्वचालित रूपमा APK फाइल डाउनलोड र स्थापना गर्नेछ विन्डोज पीसी/म्याक कम्प्युटर.
प्रक्रिया पूरा हुन केही मिनेट लाग्नेछ। त्यस पछि, द सिनेमा APK आइकनमा फेला पार्न सकिन्छ Nox एप प्लेयर गृह स्क्रिन
कार्यक्रम सुरु गर्न, केवल यसको प्रतिमा ट्याप गर्नुहोस्।
तपाईंले एन्ड्रोइड एप्स स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ लिनक्स र यसको डेरिभेटिभहरू, Mint, Ubuntu, र Fedora सहित, प्रयोग गरेर Shashlik एन्ड्रोइड इमुलेटर or GenyMotion एन्ड्रोइड इमुलेटर.
तपाईंले Shashlik एन्ड्रोइड इमुलेटरको लागि विकासकर्ताको निर्देशनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। हामीले तपाईंको सुविधाको लागि तलको प्रतिलिपि पनि समावेश गरेका छौं।
कमाण्ड प्रम्प्टमा निम्न आदेश प्रयोग गरेर, रेपो उपकरण डाउनलोड गर्नुहोस्:
$ PATH = ~/बिन: $ PATH
अर्को, देखा पर्ने अर्को स्क्रिनमा आदेश विन्डोमा निम्न आदेश टाइप गर्नुहोस्:
अब, कृपया एउटा नयाँ डाइरेक्टरी सिर्जना गर्नुहोस् र भण्डार सिंक सुरु गर्नुहोस्। तपाईको सुविधाको लागि, निम्न आदेशहरू प्रदान गरिएको छ।
अन्तमा, स्थापना पूरा गर्न निम्न आदेश टाइप गर्नुहोस्।
स्रोत निर्माण / envsetup.sh
तपाईं माथि सूचीबद्ध लिङ्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ GenyMotion एन्ड्रोइड इमुलेटर डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईको लिनक्स मेसिनमा।
अन्तमा, तपाईंको लिनक्स पीसीमा GenyMotion डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्। तपाईले यस प्रक्रियाको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क माथि।
Shashlik एन्ड्रोइड इमुलेटर प्रयोग गर्नुहोस्
बाट एन्ड्रोइड इमुलेटर डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस् http://www.shashlik.com/ -> आफ्नो मा लिनक्स पीसी, डाउनलोड गर्नुहोस् र Shash सुरु गर्नुहोस्।
डाउनलोड Cinema HD नवीनतम APK आफ्नो उपकरणमा फाइल। हामीले तपाइँको लागि सुविधाको रूपमा तल यसको लिङ्क प्रदान गरेका छौं।
ड्र्याग र ड्रप गर्नुहोस् Cinema HD MOD APK Shashlik इमुलेटरको इन्टरफेसमा फाइल गर्नुहोस्।
अर्को चरण स्थापनाकर्ता चलाउन हुनेछ।
स्थापना पछि, तपाईं प्रयोग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ Cinema HD तपाईको लिनक्स प्रणालीमा।
कृपया खोल्नुहोस् GenyMotion एन्ड्रोइड इमुलेटर.
ड्र्याग र ड्रप गर्नुहोस् Cinema HD विज्ञापन-रहित MOD APK तपाईंले अघिल्लो पृष्ठबाट GenyMotion को इन्टरफेसमा डाउनलोड गर्नुभएको फाइल।
स्थापना अब सुरु हुनेछ।
स्थापना पूरा भएपछि, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Cinema HD APK आफ्नो मनपर्ने चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरू निःशुल्क स्ट्रिम गर्न।
अब तपाईं आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरणमा आफ्नो मनपर्ने चलचित्र र श्रृंखला हेर्न सक्नुहुन्छ। Cinema APK को साथ, तपाईंले आफ्ना सबै मनपर्ने चलचित्रहरू, टिभी कार्यक्रमहरू, र शृङ्खलाहरूको निःशुल्क आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। उत्कृष्ट क्षमताहरू भएको र पूर्ण रूपमा नि:शुल्क रहेको यस अद्भुत सफ्टवेयरलाई धन्यवाद, तपाईंले अब तपाईंले चाहे जति हेर्न सक्नुहुन्छ।
Cinema HD APK तपाईंलाई उच्च-परिभाषामा दिनको लागि ठूलो संख्यामा टिभि च्यानलहरू छन्, र किनभने यो एप यति अद्भुत छ कि यसले तपाईंलाई सधैंको लागि तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणमा टाँसिएको हुन सक्छ।
यद्यपि एप अझै Google Play मा उपलब्ध छैन, यो तेस्रो-पक्ष स्रोतहरू प्रयोग गरेर तपाइँको उपकरणमा स्थापित हुन सक्छ। एप पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छ र तपाइँको मजा लिनको लागि धेरै सामग्री समावेश गर्दछ।
एपले धेरै उत्कृष्ट विशेषताहरू र सुविधाहरू समावेश गर्दछ, जसमध्ये केही निम्नानुसार छन्।
यस सेवासँग सम्बन्धित कुनै लुकेका लागतहरू छैनन्।
अनुप्रयोगको सामग्रीको उच्च गुणस्तरले यसको अपीलमा थप्छ।
कार्यक्रम अत्यन्त सुरक्षित र भरपर्दो छ।
यो एक राम्रो उपस्थिति छ कि यो धेरै आकर्षक देखिन्छ।
त्यहाँ टिभी स्टेशनहरू र अन्य सामग्री पहुँचयोग्य छन्, जुन उत्कृष्ट छ।
विधि १: पेन ड्राइभ विधि प्रयोग गर्दै
१; तपाईं आफ्नो मा यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट टिभी, जस्तै सामसु Smart स्मार्ट टिभी, LG स्मार्ट टिभी, सोनी, र अन्य।
२; सबैभन्दा पहिले, आफ्नो स्मार्ट टिभीको सेटिङ मेनु खोल्नुहोस्।
३; बाट अनुमति सेट गर्नुहोस् अज्ञात स्रोतहरू मा।
४; खोज्नुहोस् "ES फाइल एक्सप्लोरर" मा प्ले स्टोर र यसलाई आफ्नो उपकरणमा डाउनलोड गर्नुहोस्।
५; एप खोल्नुहोस् र ट्याप गर्नुहोस् ADD.
६; त्यस पछि, फाइलमा डबल-क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई क्लिक गरेर तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणमा स्थापना गर्नुहोस् बुकमार्क। -> पहुँच गर्न बुकमार्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस् र स्थापित गर्नुहोस्aसिनेमा APK एप बाट https://cinemahdv2.net/.
७; तपाइँ डाउनलोड गरिएका फाइलहरूबाट प्रोग्राम स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यसलाई प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस्।
विधि २: पफिन ब्राउजर प्रयोग गर्दै
तपाईं हुन सक्छ स्थापना गर्नुहोस् Cinema HD APK आफ्नो मा फाइल स्मार्ट टिभी प्रयोग पफिन ब्राउजर। पफिन ब्राउजर एउटा नयाँ ब्राउजर हो जुन मुख्य रूपमा स्मार्ट टिभीहरूमा एपहरू डाउनलोड गर्न प्रयोग गरिन्छ। मलाई कसरी डाउनलोड र स्थापना गर्ने भन्ने बारे जान दिनुहोस् Cinema HD पफिन ब्राउजरको साथ APK.
स्मार्ट टिभी खोल्नुहोस् प्ले स्टोर र पफिन ब्राउजर स्थापना गर्नुहोस्.
आफ्नो स्मार्ट टिभीमा, खोल्नुहोस् प्ले स्टोर र स्थापना गर्नुहोस् पफिन ब्राउजर.
खुला को पफिन वेब ब्राउजर आफ्नो मा स्मार्ट टिभी (इन्टरनेट जडान आवश्यक छ)।
डाउनलोड Cinema HD APK प्रयोग गरेर तलको लिङ्कबाट पफिन ब्राउजर। APK फाइल डाउनलोड गरेपछि तपाईंको डाउनलोड फोल्डरमा बचत हुनेछ।
तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गरिसकेपछि APK फाइलमा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि, डाउनलोड फोल्डरमा जानुहोस् र APK फाइलमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्। द अज्ञात स्रोतहरू विकल्प सक्रिय हुनेछ।
तपाईं चाहनुहुन्छ भने स्थापित गर्नुहोस् तपाईको स्मार्ट टिभीमा एपीके फाइल, तपाईले पहिले खोल्नु पर्छ अज्ञात स्रोतहरू विकल्प।
सक्षम गरेपछि अज्ञात स्रोतहरू विकल्प, डाउनलोड गरिएको एपीके फाइल खोल्न रिमोटको इन्टर बटन प्रयोग गर्नुहोस्।
यो Cinema HD APK आफ्नो मा स्थापित हुनेछ स्मार्ट टिभी तपाईंले प्रम्प्टमा स्थापना बटनमा ट्याप गरेपछि।
यो Cinema HD अनुप्रयोग अब स्थापना गरिएको छ; तपाइँ तपाइँको एप्स मा गएर यसलाई पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट टिभी.
डाउनलोड र स्थापना गर्नु अघि Cinema HD APK, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको स्मार्ट टिभीमा पर्याप्त कोठा छ।
ट्र्याक्ट टिभी एक स्मार्ट टिभी एड-अन हो जसले तपाईंको सबै हेराइ इतिहास रेकर्ड गर्दछ। Trakt TV एड-अनले तपाईंले आफ्नो स्मार्ट टिभीमा हेर्ने सबै कुराको ट्र्याक राख्छ। तपाईंले आफ्नो स्मार्ट टिभीमा देख्नुभएका अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा फर्केर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ Trakt TV एड-अन समावेश गर्ने प्रक्रियाहरू छन् Cinema HD अनुप्रयोग.
तपाईंले स्थापना गरेपछि Cinema HD अनुप्रयोग, मा जानुहोस् मेनू विकल्प र चयन गर्नुहोस् सेटिङ.
ट्याप गर्नुहोस् खाता मा विकल्प सेटिङ मेनु।
खाता मेनुमा, छान्नुहोस् Trakt TV मा लगइन गर्नुहोस् तेस्रो विकल्पको रूपमा। विकल्प चयन गरेर एड-अन स्थापना गर्नुहोस्।
अब तपाईंले आफ्नो प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ ट्र्याक्ट टिभी लगइन बक्समा प्रमाणहरू। प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड क्षेत्रहरूमा, आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि थिच्नुहोस् "साइन इन" टांक।
Trakt एड-अनले अब तपाइँलाई प्रत्येक हेराइ एपिसोडको ट्रयाक राख्न दिन्छ।
पहिले जस्तै समान प्रक्रियाहरू पालना गर्नुहोस्, तर यस पटक जानुहोस् तपाईंको एन्ड्रोइड टिभि बक्सको सुरक्षा सेटिङहरू र सक्षम गर्नुहोस् अज्ञात स्रोतहरू.
त्यस पछि, तपाइँ एपको एपीके फाइल प्राप्त गर्न आपूर्ति लिङ्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
डाउनलोड समाप्त नभएसम्म पर्खनुहोस् र फाइल खोल्नुहोस्।
स्थापना पूरा भएपछि आफ्नो एन्ड्रोइड टिभी बक्समा एप खोज्नुहोस्।
तपाइँ अब यो स्क्रिनबाट कार्यक्रम सुरु गर्न र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ स्थापना सुरु गर्नु अघि, तपाइँको एन्ड्रोइड स्मार्टफोन र वर्ष उपकरण एउटै WiFi नेटवर्कमा जडान गरिएको छ। यसका लागि तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइड फोन रुट गर्नुपर्दैन।
तपाईं डाउनलोड गर्न सक्छन् सिनेमा APK यहाँबाट आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा फाइल गर्नुहोस्।
डाउनलोड CINEMA HD v2 तलको लिङ्कबाट APK:
सुरु गर्नको लागि, तपाईंले 'को रूपमा चिनिने तेस्रो-पक्ष कार्यक्रम डाउनलोड र स्थापना गर्नुपर्छ।स्थानीय कास्ट'बाट गुगल प्ले स्टोर.
खुला को स्थानीय Cast एप। एप्लिकेसनको मुख्य स्क्रिनमा पहेंलो कास्टिङ आइकन हुनेछ। यसमा ट्याप गरेर एउटा चयन गर्नुहोस्, र तपाईंलाई स्ट्रिम गर्न सकिने यन्त्रहरूको सूचीमा लगिनेछ।
त्यहाँ सक्रिय स्क्यान परिवर्तन गर्न विकल्प हुनेछ। ' सक्षम गर्न यो विधि प्रयोग गर्नुहोस्खोज विकल्प'रोकुमा।
सुरु गर्न, जडान गर्नुहोस् Roku स्टिक तपाईको स्मार्ट टिभीमा र तपाईको घरमा स्थिर इन्टरनेट जडान छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
आफ्नो TV मा Roku स्टोर खोल्नुहोस्।
तल दायाँ कुनामा, तपाईंले खोज विकल्प देख्नुहुनेछ; यो जहाँ तपाईं खोज्न सक्नुहुन्छ स्थानीय कास्ट रिसिभर.
एकचोटि सबै स्थापना भएपछि, आफ्नो उपकरणको मेनुको मुख्य पृष्ठमा फर्कनुहोस्।
पछिल्लो स्थापना गर्नुहोस् cinema HD अघिल्लो लिङ्कमा आपूर्ति र यसलाई सुरु गर्नुहोस्।
अब तपाईंले हेर्नको लागि फिल्म वा टिभी शो छान्नु पर्छ।
तपाईंले छनौट गर्नुभएको चलचित्र वा कार्यक्रम पहुँच गर्न तपाईंलाई अद्वितीय लिङ्कहरू दिइनेछ।
तपाईंले पहिले देखिने कुनै पनि लिङ्कहरू ट्याप गरी होल्ड गर्नुपर्छ, त्यसपछि सबै कास्टसँग खोल्नुहोस् विकल्प छनौट गर्नुहोस्।
यो सबै त्यहाँ छ! अब तपाइँको मनपर्ने चलचित्र / टिभी श्रृंखला Roku मा हेर्न सकिन्छ। तपाईको एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा स्ट्रिमिङ गर्दा तपाईलाई फोन कल लिन वा सन्देश पठाउनबाट रोकिने छैन।
लाई स्थापित गर्नुहोस् Cinema HD Roku मा APK, यी पाँच सजिलो चरणहरू पालना गर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया हामीलाई मार्फत सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् सम्पर्क पृष्ठ.
एन्ड्रोइड प्रशंसकहरू नयाँ थाहा पाउँदा खुसी हुनेछन् Google TV 4K संग chromecast एन्ड्रोइड एप र खेलहरू समर्थन गर्दछ। यसले तपाइँ तेस्रो-पक्ष एन्ड्रोइड APK हरू नवीनतम Google TV 4K मा Chromecast सँग पनि स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने संकेत गर्दछ। कसरी स्थापना गर्ने हेरौं Cinema HD Google TV 4K मा APK प्रयोग chromecast यस लेखमा।
स्थापना गर्न Cinema HD विज्ञापन-मुक्त APK on Google TV 4K, तपाईंले कार्यहरूको श्रृंखला पूरा गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईंको सुविधाको लागि संक्षिप्त रनडाउन छ।
विकासकर्ता विकल्पहरू सक्षम गर्नुहोस् (भाग १)
आफ्नो Google TV ग्याजेटलाई आफ्नो स्मार्ट टिभीसँग जडान गर्न तलका चरणहरू पालना गर्नुहोस्।
गुगल टिभी स्क्रिनको शीर्ष-दायाँ कुनामा रहेको प्रोफाइल मेनु बटनमा ट्याप गर्नुहोस्।
सेटिङहरू, गियर आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् प्रणाली स्क्रोल चयन गर्नुहोस् गुगल टिभी रिमोटको केन्द्र राउन्ड बटन प्रयोग गरी ७ पटक एन्ड्रोइड टिभी ओएस बिल्डमा डाउन र छान्नुहोस्, कृपया चयन गर्नुहोस् बारेमा.
कृपया ट्याप गर्नुहोस् एन्ड्रोइड टिभी ओएस बिल्ड ७ गुगल टिभी रिमोटको केन्द्र राउन्ड बटन प्रयोग गर्ने बारे अन्तर्गत पटक पटक।
तपाईंले एउटा सूचना पढ्नुहुनेछ "तपाईं एक विकासकर्ता हुनुहुन्छ।" तपाईं मा तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ Google 4K.
स्थापना Cinema HD Google TV 4K को लागि APK (भाग))
कृपया गुगल टिभीको होम स्क्रिनमा रहेको तेर्सो मेनुबाट एप्स विकल्पमा जानुहोस्।
त्यसपछि, एप कोटिहरू अन्तर्गत, एप्स खोज्नुहोस्।
स्थापना डाउनलोडर खोज पट्टीमा डाउनलोडर प्रविष्ट गरेर आफ्नो Google TV मा।
खुला को डाउनलोडकर्ता अनुप्रयोग एक पटक स्थापना समाप्त भयो।
कृपया खोल्नुहोस् गोपनीयता > सुरक्षा र प्रतिबन्धहरू तपाईंको प्रोफाइल सेटिंग्स.
कृपया जाँच गर्नुहोस् अज्ञात स्रोतहरू अज्ञात स्रोतको विकल्प अन्तर्गत सक्षम गरिएको छ।
त्यस पछि, तपाईंको एप्स खण्ड अन्तर्गत होम स्क्रिनबाट डाउनलोडर एप सुरू गर्नुहोस्।
अनुमति दिनुहोस् मा ट्याप गरेर पहुँच अनुमति दिनुहोस्।
डाउनलोड गर्नको लागि कृपया डाउनलोडर एपको URL फिल्डमा निम्न URL इनपुट गर्नुहोस् Cinema HD Google TV को लागि नवीनतम APK.
तपाईंले APK डाउनलोड गरिसकेपछि, साधारण अन-स्क्रिन स्थापना निर्देशनहरू देखा पर्नेछ। को स्थापित गर्नुहोस् Cinema HD Google TV मा, उही चरणहरू पालना गर्नुहोस्।
यो सबै त्यहाँ छ! तपाईं कुनै पनि तेस्रो-पक्ष एन्ड्रोइड एप स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ Google TV 4K संग chromecast माथिका निर्देशनहरू पालना गरेर।
क्रोमकास्टको साथ गुगल टिभीमा सिनेमा एप कसरी अपडेट गर्ने
अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया Cinema HD सबैभन्दा भर्खरको संस्करणमा Google TV मा सीधा छ। हामीले तपाइँको लागि तल सबै कुरा रेखांकित गरेका छौं।
जानुहोस् तपाइँको अनुप्रयोगहरु > Cinema HD.
एप सूची छान्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्।
एउटा स्क्रिन देखा पर्नेछ जसले तपाईंलाई चयन गर्न सोध्नेछ पूर्ण विवरण.
अद्यावधिक वा स्थापना रद्द गर्नुहोस् दुई विकल्प छन्।
खोल्नुहोस् गुगल टिभी तपाईंको एन्ड्रोइड प्रणालीमा रिमोट एप र जानुहोस् सेटिङ, त्यसपछि एप्स चयन गर्नुहोस्। चयन गर्नुहोस् Cinema HD MOD APK यसलाई आफ्नो बाट हटाउन
कृपया ध्यान राख्नुहोस् कि तपाईंले एपको लागि स्वचालित अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन किनभने यो Google Play Store बाट होइन। सबैभन्दा भर्खरको संस्करण प्राप्त गर्न, केवल स्थापना रद्द गर्नुहोस् र अनुप्रयोग पुन: स्थापना गर्नुहोस्।
तपाईलाई असीमित मात्रामा चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरू हेर्ने अनुभव ल्याउनको लागि, सामग्री विकासकर्ताहरू Cinema HD Apk थप सुविधाहरू, फिक्स्ड बग संस्करणहरू र धेरै थपको साथ नयाँ संस्करणहरू निरन्तर अपडेट र जारी गर्नेछ।
यदि तपाइँ एपको नवीनतम संस्करणमा अद्यावधिक गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ तलका सरल चरणहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ:
जब तपाइँ प्रत्येक पटक नयाँ संस्करण उपलब्ध हुँदा स्वत: अद्यावधिक सन्देश प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाइँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ स्थापना अपडेट विन्डोमा र नयाँ संस्करण स्थापना गर्न सुरु गर्नुहोस्।
तपाईं एपको नयाँ अपडेट गरिएको संस्करणहरू पनि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ मेनु → सञ्चार गर्नुहोस् → नयाँ अपडेट उपलब्ध छ र मजा लिनको लागि नयाँ संस्करण अद्यावधिक गर्न सुरु गर्नुहोस्।
को स्थापना पूरा गरेपछि सिनेमा apk, तपाईंले अनुप्रयोग प्रयोग गर्न धेरै सरल पाउनुहुनेछ किनभने यसलाई कुनै प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्दैन। तपाईंले स्ट्रिमिङ सामग्रीको मजा लिन सुरु गर्न मुख्य स्क्रिनबाट यो एप तुरुन्तै खोल्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाइँ खोल्नुहुन्छ सिनेमा एपीके पहिलो पटक, तपाईंले एपको आधारभूत जानकारी देख्नुहुनेछ। र तपाईले ट्याप गर्नुहुनेछ "जारी राख्न"यो एप प्रयोग जारी राख्न, वा तपाइँ "ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ"बन्द"यदि तपाईं रोक्न चाहनुहुन्छ भने।
जब तपाइँ Cinema Apk प्रयोग गर्न जारी राख्नुहुन्छ, तपाइँलाई प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको साथ प्रस्तुत गरिनेछ, जसले पूर्वनिर्धारित भिडियो प्लेयर द्वारा TV शोहरू प्रदर्शन गर्नेछ। नि:शुल्क चलचित्रहरू स्ट्रिम गर्न छनौट गर्न, मा जानुहोस् मेनु र चयन गर्नुहोस् सिनेमा ड्रप-डाउन मेनुबाट।
यस Cinema Apk ले प्रदान गर्ने सामग्रीको सूचीमा, तपाईंले लोकप्रिय हलिउड चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरूको सङ्कलन पाउनुहुनेछ, र तपाईंले गृह पृष्ठबाट चयन गरेर वा खोज बाकस प्रयोग गरेर यसलाई खोजेर आनन्द लिनको लागि कुनै पनि मनपर्ने सामग्री छनोट गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो मनपर्ने सामग्री छनोट गरेपछि, तपाईंले "वाच" बटन र आकर्षक शो र चलचित्रहरूमा आफूलाई डुबाउन सुरु गर्नुहोस्। तपाईं सिनेमा APK द्वारा समर्थित २० भन्दा बढी विभिन्न भाषाहरूबाट पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। नतिजाको रूपमा, तपाइँ स्थानहरूबाट लोकप्रिय सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाइँ स्थानीय भाषासँग अपरिचित हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं यसको पूर्वनिर्धारित सेटिङसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने सिनेमा एपीके, तपाइँ यसलाई अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र एप पुन: स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वास्तविक डेब्रिड क्यासिंग रोक्नको लागि लिङ्क जनरेटर। वास्तविक डेब्रिड तपाईंलाई सर्भरहरूबाट धेरै उच्च-गुणस्तर लिङ्कहरू प्रदान गर्नेछ जसले क्यासिङ घटाउँछ र तपाईंले उच्च-गुणस्तरको चलचित्र र लिङ्कहरू देखाउनको मजा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले छिटो आफ्नो खाता सेटिङहरूमा वास्तविक डेब्रिड लग इन गर्नुहोस् र यी लिङ्कहरू तुरुन्तै प्राप्त गर्नुहोस्।
प्राय: सोधिने प्रश्नहरू Cinema HD V2
के म सिनेमा apk मा अफलाइन हुँदा चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरूको मजा लिन सक्छु?
हो। यो Cinema apk ले तपाइँलाई कुनै पनि चलचित्र डाउनलोड गर्न र तपाइँको यन्त्रमा देखाउन अनुमति दिनेछ, ताकि तपाइँसँग इन्टरनेट जडान वा मोबाइल डेटा नभए तापनि डाउनलोड गरिएका चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
के मैले डाउनलोड गर्नु अघि मेरो एन्ड्रोइड फोन रूट गर्न आवश्यक छ? Cinema HD APK?
होइन, तपाईंले पहिले आफ्नो यन्त्र रूट गर्न आवश्यक छैन, र तपाईंले सिनेमा apk डाउनलोड गर्नको लागि अज्ञात स्रोत सक्षम गर्न आवश्यक छ।
के म चलचित्रहरू, शोहरूमा उपशीर्षकहरू थप्न सक्छु Cinema HD म्यानुअल रूपमा apk?
हो। Cinema HD यो चलचित्र एपको पुस्तकालयमा उपलब्ध उपशीर्षकहरू सहित तपाईंलाई निःशुल्क चलचित्रहरू र टिभी शृङ्खलाहरू प्रदान गर्दछ। यद्यपि, यो Cinema apk एपले तपाईंलाई म्यानुअल रूपमा उपशीर्षकहरू थप्न पनि अनुमति दिन्छ। यो गर्नका लागि, तपाइँ मिडिया प्लेयरमा सेटिङहरूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि स्थानीय भण्डारणबाट उपशीर्षक फाइल (.srt) चयन गर्नुहोस् र तुरुन्तै सामग्रीहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
Cinema Apk मा चलचित्र र कार्यक्रमहरू हेर्नको लागि मैले खाता दर्ता गर्न र मासिक शुल्क तिर्न आवश्यक छ?
होइन। तपाईंले खाताको लागि दर्ता नगरीकन यस एपलाई स्वतन्त्र रूपमा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, हाम्रो वेबसाइटमा यो सिनेमा एपीके कानूनी cinemahdv2.net नि:शुल्क उपलब्ध गराइन्छ, त्यसैले तपाईंले कुनै पनि कुराको चिन्ता नगरी यो एपले प्रस्ताव गरेको मनपर्ने सामग्रीमा आफूलाई डुबाउन सक्नुहुन्छ।
यो स्थापना गर्न सुरक्षित छ Cinema HD तपाईको वेबसाइटमा एप?
Cinema HD हाम्रो वेबसाइटमा एपीके cinemahdv2.net एन्टी-मालवेयर उपकरणहरू मार्फत जाँच र परीक्षण गरिएको छ। हामीले एपको परीक्षण गरेका छौं र कुनै खराबी पत्ता लगाएका छैनौं, त्यसैले तपाईं यस एपको सुरक्षाको 100% आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ र यसले प्रस्ताव गरेको सामग्रीको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
यदि मेरो Cinema HD एपमा स्ट्रिमिङ लिङ्क समस्या छ?
यदि तपाईंले स्ट्रिमिङ लिङ्क प्ले गर्ने प्रयास गर्दा समस्या सामना गर्नुभयो भने, यसले जडान बन्द भएको संकेत गर्छ। तपाईंले लिङ्क मर्मत नभएसम्म पर्खनुपर्छ।
के यो प्रयोग गर्न कानूनी छ Cinema HD अनुप्रयोग?
डाउनलोड र स्थापना गर्न अवैध छैन Cinema HD तपाईंको फोनमा एप, तर प्रतिलिपि अधिकार सामग्री स्ट्रिमिङ उल्लङ्घन हो। त्यसैले आधिकारिक सामग्री बाहेक अरू केहि स्ट्रिम नगर्नुहोस्।
Is Cinema HD मेरो उपकरण संग उपयुक्त?
तपाईंले फायरस्टिक/फायर टिभी, फायरस्टिक लाइट, एन्ड्रोइड टिभी बक्सहरू, एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरणहरू, र थपमा सिनेमा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
Is Cinema HD उत्तम चलचित्र एप उपलब्ध छ?
, हो Cinema HD एप अब नि:शुल्क चलचित्र र टेलिभिजन कार्यक्रमहरू हेर्नको लागि उत्तम विकल्प हो।
मैले मेरो टिभीको लागि एप कसरी सेट अप गर्ने?
गुगल क्रोम, अमेजन फायरस्टिक, र यस्तै प्रविधिहरूको युगमा यो समस्या हुनु हुँदैन।
हो Cinema HD एपीके स्मार्ट टिभीहरूसँग उपयुक्त छ?
सामसुङ स्मार्ट टिभी, एलजी स्मार्ट टिभी, प्यानासोनिक स्मार्ट टिभी, सोनी टेलिभिजन, सोनी ब्राभिया टेलिभिजन, एमआई टिभी सेट, क्लाउडवाकर स्मार्ट टिभी, टीसीएल स्मार्ट टिभी, कोडाक स्मार्ट टिभी सेट र अन्य धेरै ब्रान्डहरू उपलब्ध छन्।
Is Cinema HD स्मार्ट टिभी र फायरस्टिक/फायर टिभीसँग उपयुक्त छ?
हो! Cinema HD APK फायरस्टिक वा फायर टिभीमा पनि डाउनलोड र स्थापना गर्न सकिन्छ। तपाईले पनि स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ Cinema HD Android TV, Android Box, Nvidia Shield, PS 4, र Xbox One मा।
के साथ भर्चुअल निजी नेटवर्क प्रयोग गर्न आवश्यक छ Cinema HD?
तथापि, हामी हेर्दा सक्षम VPN सेवा प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं Cinema HD.
स्थापना गर्न सम्भव छ Cinema Hd Windows PC मा?
हो! तपाइँ स्थापना गर्न यस लेखमा वर्णन गरिएका प्रक्रियाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Cinema HD विन्डोज पीसी/ल्यापटपमा।
त्यहाँ Chromecast समर्थन छ Cinema HD?
हो! Cinema HD v2 Chromecast लाई समर्थन गर्दछ।
Cinema HD Apk तपाईंलाई मनपर्ने सो र चलचित्रहरू प्रदान गर्ने धेरै Android एपहरू मध्ये एक हो। यो एप फरक छ कि यसले एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूलाई सिनेमा एप र HD चलचित्रहरू हजारौं चलचित्र र टिभि शृङ्खलाहरू प्रदान गर्दछ। तपाईंले यस एपमार्फत आफ्नो चलचित्रको जोश पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले अहिले नै आनन्द लिनको लागि हाम्रो वेबसाइटमा एन्ड्रोइड, फायर स्टिक र पीसीमा नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्।
© 2022 CinemaHDv2.Net। सबै अधिकार सुरक्षित।